အပြောင်းအရွှေ့ဆွေးနွေးမှု: Giroud သည်စိတ်ပျက်ပြီးချယ်လ်ဆီးအား Inter-TELES RELAY နှင့်ယှဉ်ပြိုင်မည်
မူလစာမျက်နှာ » အားကစားများ အပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စဆွေးနွေးရန်: Giroud သည်စိတ်ပျက်ပြီးချယ်လ်ဆီးကို Inter နှင့်အင်တာဗျူး
အပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စဆွေးနွေးရန်: Giroud သည်စိတ်ပျက်ပြီးချယ်လ်ဆီးကိုအင်တာမီလန်သို့ပြောင်းမည်
အရေးအကြီးဆုံးဥရောပလိဂ်များမှပြောင်းရွှေ့ရန်ပြတင်းပေါက်များကိုပိတ်ထားသော်လည်းဇန်နဝါရီလအတွက်စောင့်ဆိုင်းရန်စောလွန်းသေးသည်။ ကလစ်နှိပ်ပါ ဒီမှာနောက်ဆုံးပေါ်လွှဲပြောင်းကြည့်ရှုရန် အောက်တွင်နောက်ဆုံးပေါ်အတင်းအဖျင်းများရင်ပေါင်တန်းနိုင်ရန်စောင့်ရှောက်လော့။
ထိပ်တန်းဇာတ်လမ်း - Giroud သည် Inter သို့ထွက်ခွာနိုင်သည်
အဆိုပါချဲလ်ဆီးတိုက်စစ်မှူး Olivier Giroud Gazzetta dello Sport 33 ကစားသမားသည်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးနှစ်နှစ်အကြာတွင် Stamford Bridge မှထွက်ခွာနိုင်သည်ဟုသတင်းပို့သည်။ 18 ပေါင်သန်းသန်းတန်ဟာအာဆင်နယ်အသင်းရဲ့။
Inter Milan သည်ပြင်သစ်တိုက်စစ်မှူးကိုစိတ် ၀ င်စားသည်၊
Giroud သည်နာမည်ကြီးမဟုတ်ပါ။ ၏စတင်စာရွက်ပေါ်မှာ ဖရန့်လမ်းပတ် 10 ပွဲသာဒီရာသီပြီးနောက်ဂိုး ၄ ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့သည်။ ချယ်လ်ဆီးနည်းပြဟောင်းအန်တိုနီယိုကွန်တီကဂျီရိုကိုအစားထိုးချင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည် ရိုမီလူလူကာကူ .
Pogba သည် Ro driguez လဲလှယ်ရေးတွင် Old Trafford မှထွက်ခွာနိုင်သည်
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုများရရှိရန်အတွက်ပြိုင်ပွဲကို ဦး ဆောင်သည် ဂျိမ်း Rodriguez ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်, ဒါပေမယ့်ဒီလှုပ်ရှားမှုပြီးစီးလည်းနိုင်ဘူး ရှင်ပေါလု Pogba Old Trafford မှထွက်ခွာရန် 19659008] ရောင်း၏စပိန်အချက် Eldesmarque အမေရိကန်ခေါင်းဆောင် Ole Gunnar Solskjaer သည် Tottenham နှင့် Wolverhampton တို့၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသော Rodriguez ကိုဆန့်ကျင်သောပြိုင်ပွဲကို ဦး ဆောင်နေကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကွင်းလယ်လူသည် Pogba ကိုစပိန်ကုမ္ပဏီကြီးများအတွက်လက်မှတ်ထိုးရန်တွေ့မြင်ခဲ့ပြီးပြင်သစ်သားသည် Juventus သို့ပြောင်းရွှေ့မှုနှင့်နီးကပ်စွာချိတ်ဆက်နေခဲ့သည်။
28၊ Rodriguez သည်ပြီးခဲ့သည့်ရာသီကဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းသို့အငှားသွားရောက်ကစားပြီးနောက်ဘာနာဂိုးသို့အမြန်ပြန်လာနိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ရာသီပြိုင်ပွဲအားလုံးတွင် ၄ ပွဲအပါအ ၀ င်ပွဲ ၉ ပွဲသာအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
ရီးဒင်းမက်ဒရစ်တွင်ရိုဒရီဂတ်စ်၏ (၆) နှစ်စာချုပ်ကိုယခုရာသီအကုန်တွင်ကုန်ဆုံးမည်။
Emery သည် Demiral အတွက်ငွေခွဲထုတ်လိုသည်
Unai Emery သည် Juventus နောက်ခံလူကိုလက်မှတ်ထိုးလိုသည် Merih Demiral selon le တူရကီဘောလုံး .
သတင်းများအရအာဆင်နယ်သည်တစ်ချိန်ကအီတလီကလပ်အတွက်တူရကီအတွက်ဥရောပချန်ပီယံလိဂ်အတွက်ခြေစစ်ပွဲစဉ်များအပြင်တစ်ချိန်ကအီတလီကလပ်အသင်းတွင်ပါ ၀ င်ကစားခဲ့သည့် Demiral ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Demiral ဟာဒီနွေရာသီမှာယူရိုပါလိဂ်အတွက်စီးရီးအေဘေးထွက် Sassuolo မှထွက်ခွာခဲ့သည်။ Maurizio Sarri ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်
အာဆင်နယ်အသင်းသည်လူငယ်များအတွက်ပေါင်သန်းပေါင်းများစွာကို 25 ပေါင်သန်းပေါင်းများစွာပေးချေလိုကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
- Valencia Lille 4-1 ကိုယခုအပတ်အစောပိုင်းကချန်ပီယံလိဂ်၌တွေ့မြင်ပြီးနောက်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်သည်စပိန်ကလပ်တွင်အသက်အငယ်ဆုံးကစားသမားသုံး ဦး ကိုစိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်။ ပလာဇာ Deportiva လက်ဝဲကျောကပြောသည် ဟိုဆေးဂါယာ ကွင်းလယ်ကစားသမား ကားလို့စ် Soler နှင့် Forward ဖာနန်ဒိုတောရက်စ် အားလုံးသည်လာမည့်ဇန်နဝါရီလမှ Solskja transfer window ၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်ရှိသည်။
- နယူးကာဆယ်သူဌေးစတိဗ်ဘရုစ်ကငွေချေးသူအားပြန်ခေါ်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြေငြာခဲ့သည် ကျောက် Xhaka အာဆင်နယ်အသင်းမှ စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအားကစားကွင်းမှာ။ အုပ်ထိန်းသူ ပရီးမီးယားလိဂ်၏တန်းဆင်းဇယားမှလေးမှတ်သာကွာသောအသင်းဖြစ်သောဘပ်စ်ဘရုစ်သည် 27 နှစ်၏လူငယ်လူရွယ်အားအထူးသဖြင့်သူ၏ပြိုင်ကားစွမ်းအားဖြစ်သည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။
ဤဆောင်းပါးတွင်ပထမဦးဆုံးပေါ် (အင်္ဂလိပ်လို) သည်ထင်ရှား http://espn.com/soccer/blog-transfer-talk/story/3984943/transfer-talk-chelseas-olivier-giroud-set-for-inter-move-in-january